မြန်မာတွေ စည်းကမ်း ရှိဖို. အချိန်တန်ပြီ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » မြန်မာတွေ စည်းကမ်း ရှိဖို. အချိန်တန်ပြီ။
မြန်မာတွေ စည်းကမ်း ရှိဖို. အချိန်တန်ပြီ။
Posted by eros on Sep 22, 2010 in Community & Society, News, Society & Lifestyle, Think Tank | 20 comments
ဲမြန်မွာစည်းကမ်း
ကျွန်တော် ဟိုတနေ.တုန်းက စီးတီးမတ်မှာ လမ်းကြုံရင်း ဈေးဝင်ဝယ်လိုက်တယ်ဗျ။ တကယ်လမ်းကြုံလို့ဗျ၊ ၀ယ်စရာဆိုလို့ အယ်လကာလိုင်း ဓာတ်ခဲ ၂ လုံးပဲ ၀ယ်စရာ ရှိတာ။ ဒါနဲ့ ငွေရှင်းကောင်တာနားက ဓာတ်ခဲစင်က ဓာတ်ခဲကိုဖြုတ်ပြီး Express Counter မှာ သွားတန်းစီဖို့ သွားတာပေါ့။ ဘာလို့ သွားလည်းမေးဦးမယ်။ Express Counter ရဲ့ဆိုင်းဘုတ်မှာ less than 8 items only လို့ ရေးထားတာကိုး။ ဈေးဝယ်စင်တာတွေက ပစ္စည်းနည်းနည်းပဲ ၀ယ်တဲ့သူတွေ အဆင်ပြေအောင် ထားပေးထားတာပေါ့။ ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ အကြာကြီးမစောင့်ရအောင်လေ။ အဲ… ကောင်တာနားရောက်ခါနီး အန်တီကြီးတယောက် ခြင်းတောင်း ၂ လုံးကိုင်ပြီး ၀င်သွားပါလေရော။ သူဝယ်တာ အမျိုး ၂၀ လောက်ရှိမယ်။ စာမဖတ်ဘူးလားလို့ သူ့မေးလို့ ရှိရင် သူရထားတဲ့ ဘွဲ့တွေ တသီတတန်းကြီး ရွတ်ပြပါလိမ့်မယ်။ ငါသိတယ် ငါတတ်တယ်ပေ့ါ ငါ ဂရုမစိုက်ဘူး(သူ့မျက်နှာက ဖော်ပြနေပါတယ်။) ။ ဒါဆိုရင် ဘာလို့ဝင်လဲ? မေးစရာပဲ။
ငွေရှင်းကောင်တာက ကောင်မလေးကတော့ ဘာပြောမှာလည်း၊ ဘာမှမပြောဘူးပေါ့။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စားသုံးသူဖြစ်နေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် တကယ်တော့ ဒါတွေက လူပြောမှ လုပ်ရမှာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ့်အသိစိတ်နဲ့ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေပါ။ တကယ်တမ်း အဲဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာ ကျွန်တော့် မျက်စိရှေ့မှာ အဲဒီ အန်တီကြီးနဲ့ ကြုံလို့ အဲဒီအန်တီကြီးလို့ ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တာ။ တကယ်တော့ လူတော်တော်များများ အဲဒီလိုလုပ်နေကြတာပဲ။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ နိုင်ငံခြားသူ တယောက်ကတော့ Express Counter မှာ မဟုတ်ပဲ အခြားကောင်တာမှာ သွားတန်းစီပါတယ်။ သူ့မှာလည်း ၀ယ်ထားတာတွေက များတာကိုး။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုပိုင်းမှာ တော်တော်ကိုလိုပါသေးတယ်။ စည်းကမ်းတွေ တော်တော်များများတွေဟာ စာအုပ်၊ ဆိုင်းဘုတ်မှာပဲရှိသေးတယ်။ ကွမ်းတံတွေး မထွေးရ ဆိုတဲ့နေရာ၊ ရဲပတောင်းခတ်နေတာပဲ။ အမှိုက် မပုံရဆိုတဲ့နေရာ အမှိုက်က တောင်ပုံယာပုံ။ တစ်ခါက မြန်မာဧည့်လမ်းညွှန်တယောက် နိုင်ငံခြား ဧည့်သည်တစ်ယောက်ကို အလုပ်အရ လိုက်လံပြသရပါတယ်။ အဲဒီဧည့်သည်ဟာ ဆိုင်းဘုတ်တွေကို crazy ဖြစ်ပါသတဲ့။ ဆိုင်းဘုတ်တွေကိုလည်း တက်အားသ၍ ဧည့်လမ်းညွှန်ကို ဘာသာပြန်ခိုင်းပါတယ်။ တခါကြတော့ ဆိုင်းဘုတ်တခုကို ညွှန်ပြရင်း ဧည့်လမ်းညွှန်ကိုပြောပါတယ်။ ဒီတခါတော့ဘာသာပြန်စရာမလိုဘူး၊ငါဒီဆိုင်းဘုတ်သိတယ်။ ဤနေရာမှာအမှိုက်ပုံပါ လို့ရေးထားတာ မဟုတ်လားတဲ့။ ဧည့်လမ်းညွှန်ကကြည့်လိုက်တော့ လားလား ဤနေရာမှာအမှိုက်မပုံရလို့ ရေးထားတာပါတဲ့။
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေဟာ တခါတရံမှာ စည်းကမ်းဖောက်ရတာကို ဂုဏ်ယူချင်ကြတယ်။ စည်းကမ်းဖောက်လိုက်ရတာ၊စည်းကမ်းဖောက်နိုင်တာဟာ အရမ်းပါးနပ်လို့၊ လည်လို့ ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူကြတယ်လေ။ နောက်တခုရှိသေးတယ် ငါကဘာမို့လို့၊ ပညာဘယ်လောက်တတ်လို့၊ ငါက ချမ်းသာလို့၊ ငါ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကဘာမို့လို့၊ ဒါတွေ မလုပ်နိုင်ဘူး။ နားလည်ပေးပေ့ါကွ အစရှိတဲ့ ငါတွေ၊နားလည်မှုတွေနဲ့ ခုတုံးလုပ်ပြီး စည်းကမ်းဖောက်ကြတယ်လေ။ တကယ်တော့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ အထက်ကပြောခဲ့သလိုပဲ ငါ့ပိုက်ဆံနဲ့ငါဝယ်တာ ဘာဂရုစိုက်စရာလိုလဲ ငါဝင်ချင်တဲ့ကောင်တာဝင် ငွေရှင်းမယ် ဆိုတာတွေက မလုပ်သင့်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စည်းကမ်းဖောက်မှုကြောင့် သူများတကာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာမကောင်းပါဘူး။
ဒါတွေကိုတိုင်းတပါးသားတွေက တွေ့ရင် အရမ်းရှက်စရာကောင်းပါတယ်။ တချို့တိုင်းတပါးသားတွေက အဲဒီအပေါ်မှာအခွင့်ကောင်းယူပြီး မြန်မာ့မြေပေါ်မှာ စီးပွားရှာရင်းနဲ့မြန်မာတွေကို နှိမ်ပါတယ်။ နှစ်ပြားမတန်အောင်ပြောပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အာရှသားတွေပါ။ ဂျပန်၊ ကိုးရီးယား၊ တရုတ်တွေပါ။ အဖြူကောင်တွေလည်းပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ဆီက စည်းကမ်းရှိတဲ့ ဓလေ့ကို အတုယူပြီး နိုင်ငံကြီးသားပီသအောင်နေသင့်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားကို အထင်ကြီးစရာ မလိုပါ။ နိုင်ငံတကာမှာ မြန်မာတွေ အနှိမ်ခံနေရတာ စည်းကမ်းမရှိတာလည်း အကြောင်းတခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
စည်းကမ်းချမှတ်သောသူများသည်လည်း တဖက်သက် အမြင်များဖြင့် မကြည့်ဘဲ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ကြည့်ရှု၍ ကောင်းမွန်သင့်တော်သော စည်းကမ်းကောင်းများချမှတ်နိုင်ပါစေ။ (City Mart, Shopping Mall တွင်လည်း မြန်မာလိုရေးသင့်ပါတယ်။) စည်းကမ်းလိုက်နာသောသူများသည်လည်းပဲ ဟိုအကြောင်းပြ၊ ဒီအကြောင်းပြနှင့် စည်းကမ်းမပျက်ကြပါနှင့်။ စည်းကမ်းသည်လူ၏ တန်ဖိုးပါ။ မြန်မာများ စည်းကမ်းရှိရှိ ရိုးရိုးသားသားနှင့် အလျင်အမြန်တိုးတက်ကြီးပွားနိုင်ကြပါစေ။
ဘယ် စီးတီးမတ်တုန်း . . . မြေနီကုန်းက စီးတီးမတ် က တော့ လူတော်တော်များတယ် ။ မော်တင် Junction က စီးတီးမတ် က ၀န်ထမ်းတွေကတော့ တော်တော်လေး ဖော်ရွေတယ်နော် . . .
ကိုယ့်စည်းကမ်းဖောက်မှုကြောင့် သူများ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရတာမကောင်းပါဘူး ။တိုင်းတပါးသားတွေက သိရင် ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်တယ်… သိသိကြီးနဲ့ စည်းကမ်းဖောက်တာတွေ ရှိနေသေးတယ်… ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာ ညဘက်ဆို မီးနီဖြတ်မောင်းတာနဲ့… ဓါတ်တိုင်အောက်မှာ လစ်ရင် လစ်သလို အမှိုက်လာပုံသွားတာနဲ့ တွေ့တွေ့နေရသေးတယ်…
မှန်ပါတယ် စည်းကမ်းကို စာအုပ်ထဲနဲ့ ဆိုင်းဘုတ်မှာပဲထားနေသရွေ့တော့ မနိပ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ စည်းကမ်းရှိရင်ဖြင့် တ၀က်လောက် အောင်မြင်တိုးတက်ပါပြီဗျာ။
အခုရေးနေတဲ. ကို အီးရော.ကနေစပြီးတော.
ရွာသူရွာသားတွေလဲ တစ်ယောက်အစ တစ်ရွာအဆုံးအားလုံးပြင်ကြရမှာပဲမဟုတ်လား
ကျုပ်ကတော့ အမှိုက်ကို အမှိုက်တောင်းထဲ ပစ်တဲ့ အလေ့အကျင့်ရထားတယ်။ ကားမောင်းရင် လူကူးမျဉ်းကျားမှာ လမ်းဖြတ်ကူးမယ့်သူရှိရင် အမြဲတမ်းရပ်ပေးတဲ့ အကျင့်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။
လူမုန်း မခံချင်တာ နဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေတာ စည်းကမ်း မရှိတဲ့ သူကိုအားပေးအားမြှောက် လုပ်နေသလိုပဲ ။ ဆိုင်တာဝန် ခံက ယဉ်ကျေးပြတ်သား စွာ တခြားကောင်တာမှာ ရှင်းခိုင်းရ မှာပေါ့ ။ ဘေးလူ ကလဲ ဝင်ပြောပေး ရမယ် ။
တခါက အမဲမ တယောက် အင်္ကျီ ဝယ် တာကောင်တာမှာ ကြားဖြတ် တာ အရောင်းဈေးသည် ကသူ့ကိုကျော်ပြီး အရင်လာတဲ့ သူ ကိုပဲ serve လုပ် တယ် ။ ဘတ်စ ပေါ် မှာအစာ နဲ့ရေမစားသောက် ရတာ ကျောင်းသူလေး က မသိအောင်ခိုးသောက် တာကိုမြင် သွားတဲ့ ခရီးသည် က ချက်ချင်း နေရာကထ ပြီး တားမြစ် တယ်။ ဘတ်စ ကားဆရာ ကတောင်ပြောစရာ မလို ဘူး ။ ဒါ ကိုယ်တွေ့တွေပါ ။
ကောင်းလိုက်တဲ့ အမူအကျင့်များဗျာ။ အဲဒီမှာ တခုသွားတွေ့တာက စည်းကမ်းလိုက်နာတာ ဟာ လူတိုင်းတာဝန်ဖြစ်သလို စည်းကမ်းမလိုက်နာ တာကို တားမြစ်ဖို့လည်း လူတိုင်းတာဝန်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ က လာတားမြစ်ရင် သူက ဘာဆိုင်လို့လဲပေါ့။ ဒါမျိုးစိတ်ဓာတ်တွေ ပြင်ရမယ်ဗျ။
အရင်တစ်ခါတုန်းက စာလေးကိုပဲ ပြန်ရွတ်လိုက်အုန်းမယ် ..
” မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် .. ”
” မိမိအတန်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် .. ”
” မိမိကျောင်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် .. ”
” မိမိတိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည် .. ”
လူလစ်တုန်း ပြစ်လိုက်အုန်းမှာပဲ ရွှီးးးးးးးးးးးးးးးး ဘုတ် ……..
(ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေကို ကြည့်လိုက်သည်၊ ဘယ်သူမှမရှိ) ဟန်မပျက် ဆက်လက်ထွက်ခွာလာခဲ့သည်
ရွာထဲမှာ အမှိုက်ထုတ် တစ်ထုပ်တော့ ထားခဲ့ပြီ အသုံးဝင်သူအတွက်တော့ ရွှေထုပ်ပေါ့ အသုံးမ၀င်သူအတွက်တော့ …….)
အမှိုက်ကို ဘယ်တော့မှ စည်းမဲ့ မပစ်ဘူး။ဒါပေမယ့် မျဉ်းကျားကတော့ မကူးနိုင်သေးဘူး
အယ်ရောစ် ပြောတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် မမြင်မိဘူးလားလို့.. အမှတ်တမဲ့ ဖြစ်နေတာလား မသိဘူး.. ဟီးဟီး..
ကောင်တာ နံပါတ်တွေ ချိတ်ထားတာတော့ တွေ့တယ်။
နောက်တခါ သွားမှ ရှာကြည့်လိုက်မယ်။
ဟုတ်မှာပေါ့ အန်ကယ်ကြီးရဲ့.. လူတွေကို သတိထားမိစေချင်ရင် လူတွေ အတွက် ထင်သာ မြင်သာတဲ့ စာလုပ်သင့်တာပေါ့။ ဈေးဝယ် တဲ့ နေရာထဲမှာ ဘိုလိုပဲ သုံးချင်နေတာ စီးတီးမတ်ပဲ.. မြန်မာတွေကို ဈေးမရောင်းချင်ဘူး နဲ့ တူပါရဲ့..
သူကတော့ ပညာတတ် အသိုင်းအ၀ိုင်း ပိုက်ဆံရှိတဲ့ လူတွေကို ညွန်းချင်လို့ ဘိုလိုပဲ ရေးတယ် ပြောချင် ပြောမယ်။
တိုင်းတပါး ရောက်ရင်တော့ ဘိုလို ရေးတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တိုင်း ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်သလားလို့ ဖတ်မိချင် ဖတ်မိမယ်။
မြန်မာပြည်မှာ နေတဲ့ မြန်မာလူမျိုး မြန်မာလို မရေးတဲ့ ဆိုင်းဘုတ် သတိထား ဖတ်မိဖို့ ဆိုတာ.. တွေးသာ ကြည့်ပါတော့။
အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ဆိုတာ ဒီလိုတွေက စတာပါ။
အပေါ်က ကွန့်မန့်တွေဖတ်ရတာ ပီတိ ဖြစ်စရာပဲ ကိုအယ်ရော့(ရှာတောင်ခလုပ်တိုက်တယ်) ပြောလိုက်ရမှာဗျ.. ဒါမှ သူအရှက်ကွဲမှာ ..ကိုကတော့ အဆဲခံလိုက်ပေါ့ ..:) အဲဒီအချိန် ဘေးလူတွေဝိုင်းကြည့်ရင် သူတို့လဲသတိထားမိ.. ၀ိုင်းကြည့်တဲ့လူတွေလဲဒီအဖြစ်အပျက်ကိုသတိယပြီး နောက်ကိုဆင်ခြင်နိင်တာပေါ့.. ကြုံတုန်းလေး နဲနဲပြောပါရစေ..ကိုရီးယားမှာ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ ၅ ကျောင်းလောက်ရှိတယ် ကွမ်းတတွေး မထွေးရ ဆိုတဲ့ ကျောင်းက ကွမ်းတံတွေး အများဆုံးတွေ့ရတယ်တဲ့ … နောက်ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်းတယောက်ပါ ကိုရီးယားမှာပဲ သူ့နဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်တဲ့သူဆေးရုံ တက်တော့ သတင်းမေးသွားတာ ဆေးရုံရှေ့ရောက်တော့ ရောင်းလည်လည်ဖြစ်နေတယ်တဲ့ ဒါနဲ့ဘေးနားက သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ သူငယ်ချင်းက ဒီဆေးရုံ မှာ ရှိနိင်တယ်တဲ့ မင်းဘယ်လိုသိလဲ လို့ ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းက မေးတော့ ပန်းအိုးထဲ လက်ညိုးထိုးပြတယ် ကွမ်းတံတွေး…:)
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာတောင်မှ လေယာဉ်ကဆင်းလာတော့ ပက်စ်ပို့စ်တွေ ပြန်စစ်တဲ့နေရာမှာ သူ့နေရာနဲ့သူ စစ်နိုင်အောင် (မြန်မြန်ပြီးအောင်) ခွဲထားပေးပါတယ် … ဆိုင်းဘုတ်ကလေးတွေ ရေးထားတယ် … ဒါပေမယ့် လူတွေက ဂရုမစိုက်ပါဘူး … ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာမှာလဲ ၀င်တန်းစီနေကြတယ် … ၀န်ထမ်းတွေကလဲ ဘာမှမပြောဘူး …
တရုတ်ပြည်မှာ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေရာမှာ ၀င်တန်းစီမိလို့ကတော့ အဆဲခံလိုက်ရမှာ အသေအချာပဲ … ကျော်ပြီးတန်းစီရင်လဲ ၀ိုင်းဆဲတာပဲ …
နယ်စပ်အ၀င်အထွက်ဂိတ်မှာတောင်ကောင်တာဆီရောက်ဖို့ မျဉ်းဝါလေးတားထားတာကိုကျော်ပြီးရှေ့ တိုးရင်အအော်ခံရတယ်ဗျ (တရုတ်ဘက်ခြမ်းမှာပေါ့နော်)
စူပါမားကတ်တွေက နိုင်ငံခြားကလို အတုယူပြီး အပြင်ဆင်ကအစလိုက်လုပ်နေတာ … ရေးတဲ့စာကို နားလည်တဲ့လူ ရှိသလို ၊ နားမလည်တဲ့လူတွေ ၊ မဖတ်မိတဲ့လူတွေကလည်း ရှိမှာပါပဲ … ဖော်ရင်နာရော ၊ လိုကယ် စားသုံးသူပါ အဆင်ပြေအောင် ဘာသာ နှစ်မျိုးနဲ့ ရေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ် …။ စူပါမားကတ်ရောက်သွားလျှင် လိုအပ်တာတွေ တနေရာထဲ အစုံရပေမဲ့ …စ်ိတ်ထဲ မွမ်းကြပ်သလို ခံစားမိတယ်… လူသွားလမ်းကို နှစ်ယောက်ရှောင်စာလေးပဲ ဟပေးထားပြီး .. ပစ္စည်းတွေ အတော်ဆံ့အောင် စင်တွေ တန်းထားတာ ကြပ်ပိတ်နေတာရယ်.. ခြင်းတွေနဲ့ အချင်းချင်း မတိုက်မိအောင် ရှောင်ရတာရယ် ၊ ပိုက်ဆံရှင်းဖို့ စောင့်နေရတာ ကြာတာရယ်ကြောင့် … စီးတီးမတ်မှာမဖြစ်မနေ၀ယ်ရမဲ့ ပစ္စည်းပဲ ၀ယ်ပါတယ်.. …. ။ တခြားဆိုင်တွေက လူဒီလောက်မကြပ်တော့ အာရုံမနောက်တော့ဘူးပေါ့…။
စည်းကမ်းဆိုတဲ့ စာကား ကျွန်တော်တို့ နားမလည်ပါဘူး။